Maxaa looga hadlay Kulanka Golaha Wasiirada K/Galbeed? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxaa looga hadlay Kulanka Golaha Wasiirada K/Galbeed?
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur galbeed Soomaaliya, Mudane; C/Casiis Xasan Mohamed lafta –gareen, ayaa Maanta guddoomiyey Shirkii ugu horeeyay ee Golaha wasiirrada Maamulkaasi.
Shirka ayaa waxaa ka qeyb galay dhammaan Wasiirrada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana ugu horeyn isu bartay Wasiirrada dhawaan la Magacaabay iyo Madaxweyne Lafta gareen.
MD Axmed Madoobe amaro horleh soo saaray (SABABTA)